Vokatry ny fifamaliana avy nisotro toaka dia novonoin’ireo roalahy tamin’ny fomba feno habibiana ny namany. Niapanga azy
roalahy ireo ny ra velon’ity farany izay hita taratra teny amin’ireo fitaovam-piadiana sy ny fitafiany. Ny alahady 17 martsa lasa teo tokony ho tamin’ny 6 ora hariva dia naharay antso vonjy tamin’ny fokonolona ny polisy tao Ihosy fa misy 2 lahy mitondra famaky mihosin-dra mandehandeha eo an-tanàna. Avy hatrany dia namaly ny antso izy ireo ary niditra an-tsehatra ka voasambotra ny iray tamin’ireo roalahy ireo fa ny 1 kosa tafatsoaka. Nandritra ny famotorana no nahafantarana fa fifamaliana niseho tamin’ny fotoana niarahan’izy ireo nisotro tao amina trano fisotroana iray tao an-tanàna ihany no niatombohany. Rehefa nirava tao amin’ilay “bar” izy ireo ka lasa lavidavitra dia novonoin’izy ireo ny namany iray. Mbola nihosin-dra ny tanana sy ny ankajon’ireto roa ireto tamin’ny fotoana nanamboran’ny polisy azy ireo ary nahatrarana basy poleta vita gasy 1 sy famaky lehibe 1 teny amin’ilay tovolahy voasambotra. Efa natolotra ny fitsarana ny raharaha ary efa notazomina vonjimaika any am-ponja ilay nahavanon-doza.